musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Denmark nePoland vanoenda kukona coronavirus
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Denmark Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Poland Breaking Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mukuda kwekuda kudzora kupararira kwe coronavirus chirwere chapararira munzvimbo, Porendi neDenmark nhasi vazivisa kuti vachavhara miganhu yavo kune vashanyi vekunze uye kuti vese vasiri vagari vacharambidzwa kupinda munyika.
Danho iri rinouya apo Denmark yakanyora nyaya yayo yechi800 yechirwere chinouraya nemusi weChishanu, nePoland yema68. Kumwe kunhu muEurope, Czech Republic, Slovakia, neUkraine zvakavhara miganhu yavo kune vekunze, nepo dzimwe nyika dzinoverengeka - dzichangoburwa pakati peAlbania - dzakarambidza kufamba kuenda nekubva kunzvimbo dzinotapukira hutachiona seItari neSpain. Cyprus yakabatana nerondedzero neChishanu, ichiramba kupinda kune vasiri veEuropean.
Germany neFrance, zvisinei, vakanamatira nekuzvipira kwavo kuti vachengetedze miganhu yavo yakavhurika. Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron akataura neChina kuti haazovhara miganhu yeFrance, achizivisa izvozvo "Coronavirus haina pasipoti." Merkel, zvakadaro, akaramba kubatana neAustria yaive pedyo nekurambidza kupinda kuGerman kubva kuItari.
Kufa kutsva mazana maviri nemakumi mashanu kwakanyorwa muItaly pakati peChina neChishanu, nepo France yakamhan'ara mamwe ma250 ehutachiona. Pasi rose, denda reCovid-79 rakabata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemakumi mana ndokuuraya vanopfuura zviuru zvishanu nemazana matatu, vazhinji vacho vari kuChina.